kbs — Fri, 08/19/2011 - 20:01
जीवनमा के के न गर्छु भन्ने लाग्थ्यो । उमेर छदाँ त उडेको चरा नै समातुँला झै लाग्थ्यो । घमण्डले छाती धक्क फुल्थ्यो । भलै डक्टर, ईन्जिनियर, पाईलट बन्ने सपना देखिएन तर पनि केही फरकशैलीको काम गर्नेछु भन्ने कुराले जरो गाडिरहन्थ्यो । अरुभन्दा पृथक देखिन मन लाग्ने। सायद यही घमण्डीपनाको चरमता थियो। कसैले भनेको नमान्नुमा गर्व महशुस गरिन्थ्यो । यद्यपि साथीहरूको निम्ति ज्यानै हाजिर हुन्थ्यो । कसैले चलनचल्ती अर्थात फेसनको कपडा आफ्नो जस्तै लगाएको देखियो कि भोलिपल्टदेखि त्यो कपडा आफ्नो शरीरमा घुसाउँदै नघुसाउने बरु च्यातिएकै भएप नि पुरानै लाउने तर् अरु भन्दा पृथक हुनै पर्ने। अहिले सम्झिँदा पनि आफैँ देखि घृणा लागेर आउँछ आफ्नो बानी देखेर ।
kbs — Mon, 07/11/2011 - 19:01
सप्पै चोर हुन् । सप्पैलाई आगो लाएर जलाइदिनु पर्छ या बमले उडाइ दिनुपर्छ । पार्टी पनि सप्पै चोर ! नेताहरू पनि सप्पै चोर ।' यस्तो बोल्दै हिँड्ने मान्छेलाई तपाईंले कतै भेट्नु भएको छ ?
kbs — Thu, 07/07/2011 - 18:33
'पुरुषको काम कमाइ गर्ने, महिलाको काम घर गृहस्थी थमाइ गर्ने' भन्ने उखान आज शनै शनै बिस्थापित हुँदैछ । यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा हो । बिगतका पछिल्लो दशकबाट महिलाहरू पनि घरको संघार नाघेर कामकाजी बन्न थालेको र स्वावलम्बी हुन थालेकोले यस्ता थोत्रा र निरंकुशी उखान टुक्काहरू बिस्तारै मिथ्या बन्दै गएका छन् । यसो हुनुमा विश्व परिवेशमा आएको छलाङ्ग, शिक्षा स्वस्थ्य बारे ब्यापकता, राजनैतिक सामाजिक परिवर्तन र तीब्र प्रबाह, महिला स्वयंमा आएको सचेतनाको ब्यापक परिवर्तन र समग्र समाजको आमूल सचेत परिवर्तनको ठुलो हात रहेको छ । अबका नेपाली महिला घर देशमा मात्रै कामकाजी नरहेर परदेश सम्म पुगेर शिक्षा उपार्जन अर्थोपार्जन गरी परिवार र समाजलाई टेवा दिन सक्ने भएका छन् । भलै यो सुरुवात हो तर आमा हजुरआमाहरूको पिढीको तुलनामा अहिले आएको यो बिशाल अन्तरलाई भने सन्तोषपूर्ण नै मान्नु पर्छ ।
नारी-पुरुष समानताको तिब्र असर र उपलब्धी मान्न सकिने यो परिवेश सँगै कतिपय नकारात्मक अवस्था पनि सिर्जना भएको भने नकार्न सकिन्न । आधा जसो शिक्षित र कामकाजी महिलाहरूको मानसिकता यस्तो पनि छ कि समानताको अर्थ लोग्ने या परिवारका अन्य सदस्यलाई हेप्नु हो ।
kbs — Sat, 06/04/2011 - 18:47
जनगणतन्त्र, लोकतन्त्रका विषयमा विचारको अनुभूति गर्ने सिर्जनात्मक मूर्ति ढुङ्गामा बनाउन सकिन्छ । अहिलेको समयसापेक्ष हुने गरी ढुङ्गामा मूर्ति कुँद्ने हाम्रा मूर्तिकारले विचारका मूर्ति बनाउनु कर्तव्य हो ।
अरूलाई कस्तो हुन्छ थाहा छैन, सबै लेखन्तेहरूको एउटै स्वभाव, शैली, बानी र उत्प्रेरणाका आधारहरू समान हुन्छन् भन्न सकिँदैन र भन्न मिल्दैन पनि ।
kbs — Mon, 04/25/2011 - 18:33
मान्छेहरू आवेशमा मनपरि बोल्ने गर्छन् । आफूले अरुका लागि के बोलियो भन्ने कुराको समेत ख्याल राख्दैनन् । आफूद्वारा बोलिएको कुनैपनि शब्दले दोश्रो व्यक्तिलाई जीवनभरको पीडा दिन सक्छ र उक्त पीडा सधैंभर रहिरहन्छ । कसैलाई पिट्नु, शरिरमा चोट पुर्याउनु या अंग भंग गर्नु बचनको प्रहार भन्दा सामान्य हुन्छ । किनकि यसको सीमा निश्चित हुन्छ । देह नै यसको सीमा भएकाले यसमा लागेको चोट औषधीमूलो पश्चात समाप्त हुन्छ परन्तु अरुलाई भनिएका कटु बचनहरूले हृदयको गहिराईसम्म नै प्रहार गर्छन् तथा यसले बनाउने घाउ जीवनको अन्तिम घडीतक निको हुँदैन । यसैले भन्ने गरिन्छ “वचनको घाउ कहिल्यै निको हुँदैन । “यो कुरा सत्य प्रतित लाग्छ । एक पटक मेरी आमा सामान्य दुर्घटनामा पर्नु भो । खुट्टामा चोट लाग्यो र खुट्टा फुलिएर आयो । केही दिनको उपचार पश्चात खुट्टाको पीडा कम पनि हुँदै गयो । म सानै थिएँ । गाउँमा खेल्न जाँदा छिमेकी घरमा आमाको अवस्था बारेमा भनेछु । मेरा कुरा सुनेपश्चात छिमेकी नातेदार एउटी आमाले “खुट्टै भाँचिनु पर्ने “भनिन् । घरमा फर्कें र रुँदै सो कुरा आमालाई सुनाएँ । आमाले सान्त्वना दिंदै मलाई सम्झाउनु भयो । यो घटना घटेको आज २२ बर्ष भैसकेको छ । ती आमैसँग मेरो कुनै पनि रिस, राग र बैरभाब कहिल्यै छैन । तापनि उनको बचनले बनाएको घाउ काहीं बल्झिने गर्छ ।
kbs — Wed, 03/02/2011 - 19:22
kbs — Fri, 02/18/2011 - 18:57
थरीथरीका इच्छामा पनि कुनै इच्छा व्यक्ति विशेषलाई मात्र सरोकार राखेर हिँड्छ भने कुनै चाहिँ सबको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दै हिँड्छ । इच्छा स्वार्थको अर्को रूप हो । सुख सबैको भित्री इच्छा हो । समृद्धशाली बन्ने सबैको सपना हो । शान्तिको सुवास चारैतिर फैलियोस्, उन्नतिको मूल सर्वत्र फुटोस्, भातृत्वको भावना यत्रतत्र मौलाओस् भन्ने चाह सबको हुन्छ । यही आकाङ्क्षा र अपेक्षा एउटा चोखो भावना हो । धेरै दुःख पछिको थोरै सुख पनि अमृत बन्छ । लामो समयसम्म कहर काटेपछि मनमा नौलानौला रहर जाग्छन् । ती रहर पूरा भए मान्छे गमक्क पर्छ, पूरा नभए भाँडभैलो गर्न तम्सला कि भन्ने त्रास हुन्छ । कलिलो मुनालाई निमोठ्न सजिलो हुन्छ । त्यो मुना जति कलिलो देखिन्छ, त्यति आशलाग्दो भविष्यको जलपले उज्ज्वल भेटिन्छ । कहर पछिको रहर ‘चाडै काम पाइयोस्, चाडै सुविस्थाको माम पाइयोस्’ भन्ने हुन्छ । ‘तातै खाऊँ जली मरूँ’ पनि नहोला भन्न सकिन्न । हेक्का राख्न नसके हात परेको फल पनि गुम्न सक्ने अवस्था हुन्छ । नाम नै गुमनाम हुन सक्छ । शिष्टता देखिनुपर्ने ठाउँमा अशिष्टता प्रदर्शित हुन सक्छ । राम्रो र हाम्रोको भावना मरेर ‘यत्ति मेरो यत्ति तेरो’को भावना उम्रन सक्छ । खुशीको आँसुको सट्टा दुःखको आँसु टल्पलिन सक्छ । मनमा शितलताको वास हुनुको सट्टा मनमा बेचैनीको निवास हुन सक्छ । धेरे कुराहरू आउँछन् । मीठामीठा हातबाट उम्कन्छन् भने तीतातीता वरवर रहन्छन् । तिनै तीतातीता कुराहरूले घेरेर फेरि अर्को खालको कहरको बाटो तयार हुन्छ । त्यस बाटोका पदयात्री हामी सबैले हुनुपर्छ । रक्तमुच्छेल भएर यात्रा सबैले गर्नुपर्छ । पश्चात्तापका आँसु त्यत्तिखेर बग्न सक्छन् । समय हातबाट फुत्किसकेको हुनेछ । पश्चात्तापले जल्नु र गल्नु सिवाय हामीसँग अर्थोक केही रहन्न । ‘बिग्रेको मान्छेको भत्केको घर भत्केपछि केको डर’ भन्ने अल्पदृष्टि जन्मन सक्छ । इज्जत गुम्न सक्छ, नाम हराउन सक्छ, यात्रा दुःखदायी अपुरो र अधुरो हुन सक्छ । र, पुनः पीडादायी अध्याय उल्टन सक्छ ।
kbs — Mon, 02/07/2011 - 04:30
kbs — Fri, 12/31/2010 - 18:07
केहीदिन अगाडि बजारका शुभलाल तामाङ मरे । त्यसपछि बाईसबर्षे छिमेकी गोविन्द थापा मरे । अस्तिका दिन चौरासी बर्षीय केराबारी हजुरबुबा बिते । हिजो अठ्ठाईस-तीस बर्षका अशोक राउत बितेको खवर आयो । भर्खर भीमप्रसाद पराजुली गुरुकी मातालाई हेरेर आएँ । मोटरसाईकलको ठक्करबाट बेहोश अवस्थामा पन्ध्रबीस दिन अघिबाट थला पर्नु भएको छ । उँभो आउने अवस्था न्यून भएरै होला अस्पतालले घरमै फर्काइदियो । रोजरोज मृत्युका दृश्यहरू साक्षात्कार गरिरहेको छु । सम्भव भएसम्म र भ्याएसम्म मृतकहरूलाई भेट्न कुदिरहेको छु । मृत्युको क्षणमा मृतक ब्यक्तिहरूको अवस्था निरीक्षण गर्न नपाएपनि भरिसक्य मलामी गएर उनीहरूको अन्तिम दाहसंस्कारको दृश्यलाई नजिकबाट टुलुटुलु हेर्ने गर्छु ।
आजभोलि मेरो गाउँघरमा भित्रिएका प्रत्येक मृत्युहरूले मेरै मृत्युको खवर लिएर आएका हुन् जस्तो लाग्न थालेको छ । मृत्यु सबैभन्दा अकाट्य सत्य । जन्म अकाट्य सत्य नहुन सक्छ । तर मृत्यु घटाउन नमिल्ने, छाँटकाट गरी छोट्याउन नमिल्ने, लम्ब्याउन नमिल्ने अन्तिम सत्यको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्न थालेको छु । म सानो हुँदा मृत्युदेखि असाध्यै डराउँथें । तीनचार बर्षको कलिलो बाल्यकालमा आमाको मृत्युलाई पहिलोचोटि नजिकबाट साक्षात्कार गरेपछि मृत्यु मेरोलागि औधि त्रासदिको विषय बन्यो । मृत्युको भीषण र भयानक रूपले मलाई तर्साउन थाल्यो । मेरी आमाको सम्झना आँउदापनि मृत्युकै बिभत्स दृश्य मेरो सामु खडा हुन पुग्यो । त्यतिखेर मेरो मनोदशा पूराका पूरा याद छ, म आमालाई सम्झिंदा पनि डराउन थालेँ । मेरो बालहृदयमा मृत्युको त्रासद चित्र यसरी खोपियो कि मेरी बात्सल्यमयी मातालाई चटक्क छिनेर लाने त्योचिज संसारमै क्रुर र आततायी अनुहारको हुँदो हो ।
kbs — Tue, 12/21/2010 - 20:08
सहरका एक चर्चित पत्रकार । राष्ट्रिय दैनिकमा निकै तगडा आर्टिकल लेख्छन् । उनका सनसनीखेजपूर्ण रिपोर्टिङले कहिलेकाहीँ समाजलाई तताइदिन्छ । उनी सामाजिक अन्धविश्वास र रुढीवादी प्रथाको विरुद्धमा विगत केही समयदेखि कलम चलाईरहेका छन् । रुढिवादी चिन्तनको विरुद्धमा वैज्ञानिक विचारको वकालत गरेर शानदार लेख तयार गरी साइकल चढेर लेखलाई कुरियर सेवामा पुर्याउन सहरतिर लागे । सहर नपुग्दै अगाडिबाट विरालोले बाटो काट्यो । उनी सरक्क साइकल मोडेर घर फर्के । साढेँ विरालोले कस्तो अपशकुन लगायो । भोलिको पेपरमा निस्किने लेख ननिस्किने भयो भनेर कोठामा पिरिएर बसे ।
बजारको सिटिहलमा प्रगतिशील संस्कार संस्कृतिको उन्नयन र विकास तथा कुसंस्कारको अन्त्य विषयक विचारगाष्ठिको आयोजना गरिएको थियो । एक ब्राह्मण थरका जनवादी नेताले निकै क्रान्तिकारी विचारहरू पस्केर श्रोताहरूलाई स्तब्ध तुल्याए । जनवादी संस्कृतिका वैकल्पिक खाकाहरू निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा निकै गहन दार्शनिक विचारहरू पोखे । उनको भाषण सुनेर निकै जनाले हात दुखुन्जेल ताली पिटे । भोलिपल्ट उनको गाँउमा डुल्न जाँदा थाहा भयो, उनी टपरामा खिरको डल्लो बोकेर पँधेरातिर कुद्दै रहेछन् । कमरेडले के लुकाएर बोकेका छन्, छिमेकीलाई सोधेँ । उनले जवाफ दिए, आज साराद थियो उनको घरमा । नभन्दै सातजना बाहुन पढाएर धुनधान पितृतर्पण गरिएको रहेछ । छिमेकीको कुराले म स्पष्ट भए ।
kbs — Sat, 12/04/2010 - 19:09
राजेन्द्रप्रसाद पन्त 'तारकीणी'
वनभोज शब्दले मलाई आफू वनमान्छे पो हुँ कि भन्ने कुरा सम्झना भयो। ईश्वरको सिर्जना मानिएको मान्छेलाई विज्ञानले बाँदरको सन्तान देखाइदियो। हाम्रा पुर्खाहरू त बाँदर हुन्, वनमै खान्थे, खेल्थे र वनमै रम्थे। तिनै विशेष प्रजातिका बाँदर विकसित हुँदै मानवजातिको प्रादुर्भाव भयो। अनि, विस्तारै मानवलाई उसको सभ्यताले जंगलबाट गाउँ र सहरसम्म पुर्‍यायो। आजको मान्छे जंगलबाट हिँडेर सहरमा रमेको छ। गुफा, ओडार, झुप्रा हुँदै गगनचुम्बी महलमा बस्न उसको सभ्यताले उसलाई कर लगायो। निकैवटा सभ्यताको यात्री मानव आज किन वनभोज रुचाउँछ त ?
kbs — Sun, 09/12/2010 - 18:56
दुई अक्षर 'म' र 'न'को मिलानबाट मन एउटा शव्द बन्छ । जसको अर्थ भावार्थलाई व्याख्या गर्न सार्‍है कठिन छ । मन के हो ? यो कहाँ छ ?को सँग हुन्छ ? कस्तो हुन्छ ? आदि इत्यादि कुराहरूको उत्तर पाउन सकिदैन । तर पनि मन हुन्छ । मनका वारेमा धेरै कथा लेखिएका छन् । पुराण र उपनिषदमा व्याख्या भएका छन् । ज्ञानी-महाज्ञानी, सन्त-महन्त, तपस्वी-यशस्वीहरूले प्रवचन गरेका छन् ।